Fanomezana momba ny fikarohana momba ny mari-pahaizana Ben Rafoth - Fikambanan'ny Ivotoerana manoratra iraisam-pirenena
15 Janoary sy 15 Jolay isan-taona.
Ny Fikambanan'ny Ivotoerana Manoratra Iraisam-pirenena dia manamafy ny vondrom-piarahamonina foibe fanoratana amin'ny alàlan'ny hetsika rehetra ataony. Ny fikambanana dia manolotra The IWCA Ben Rafoth Graduate Research Grant hanentanana ny fampandrosoana ny fahalalana vaovao sy ny fampiharana vaovao ny teoria sy fomba efa misy. Ity fanampiana natolotry ny manam-pahaizana foibe fanoratana ity sy ny mpikambana IWCA Ben Rafoth, dia manohana tetik'asa fikarohana mifandraika amin'ny doka-pianarana na dissertation dokotera. Na dia tsy ny famatsiam-bola aza no antony voalohany ananan'ity fanomezana ity, dia nanohana ny fivezivezena izahay ho anisan'ny asa fikarohana manokana (ohatra ny fitsangatsanganana amin'ny tranokala manokana, tranomboky na arisiva hitarika fikarohana). Ity vola ity dia tsy natao hanohanana ny dia amin'ny kaonferansa fotsiny; fa kosa ny dia dia tokony ho ampahany amin'ny programa fikarohana lehibe kokoa voalaza ao amin'ny fangatahana fanampiana.
Ireo mpangataka dia afaka mangataka hatramin'ny $ 1000. (NAOTY: IWCA dia manana ny zony hanova ny sandan'ny loka.)
Ny fangatahana dia tsy maintsy apetraka amin'ny alàlan'ny Portal momba ny mpikambana IWCA amin'ny daty voatondro. Ny mpangataka dia tokony ho mpikambana ao amin'ny IWCA. Ireto ny fonosana fangatahana:
Taratasy fonosana natolotra ny filohan'ny Komitin'ny Fikarohana momba ny vola fanampiana izay mivarotra ny komity amin'ny tombony azo avy amin'ny fanohanana ara-bola. Ny tena manokana dia tokony:
Mangataha ny fandinihan'ny IWCA ny fangatahana.
Ampahafantaro ny mpangataka sy ny tetikasa.
Farito ny fomba hampiasana ny vola fanampiana (fitaovana, dia fikarohana fikarohana mandritra ny fotoana fohy, photocopie, postage, sns.).
Mametraha tatitra momba ny fandrosoana any amin'ny IWCA, eo am-pikarakarana ny filohan'ny Komitin'ny Vola Fikarohana, izay tokony ho XNUMX volana aorian'ny nahazoana vola fanampiana. Rehefa vita ny tetikasa dia andefaso ny tatitra farany momba ny tetik'asa any amin'ny Birao IWCA, izay karakarain'ny filohan'ny Komitin'ny Vola Fikarohana.
Diniho fatratra ny handefa sora-tanana miorina amin'ny fikarohana tohanan'ny iray amin'ireo famoahana IWCA, WLN: A Journal of Writing Center Scholarship, The Writing Center Journal, The Peer Review, na ny International Writing Centers Association Press. Vonona ny hiara-hiasa amin'ny (tonian-dahatsoratra sy mpandinika) hanitsy ny sora-tanana mety hamoahana azy.
Komitin'ny Fanomezana Process
Raha mila fanazavana fanampiny na fanontaniana dia mifandraisa amin'ny talen'ny Komitin'ny Vola Fikarohana, Katrina Bell, kbell@coloradocollege.edu.
2021: Marina Ellis, “Ny toetry ny Mpampianatra sy ny Mpianatra miteny espaniola manoloana ny fahaizana mamaky teny sy manoratra ary ny fiantraikan'ny toe-tsainy eo amin'ny fotoam-pianarana”
2020: Dan Zhang, "Fanitarana ny lahateny: Fifandraisana mifono vatana amin'ny fampianarana an-tsoratra" ary Cristina Savarese, "Ivotoerana fanoratana ampiasaina amin'ny mpianatra eny amin'ny oniversite"
2019: Anna Cairney, St John's University, "Le centre d'exploitation: Paradigma fanontana amin'ny fanohanana ireo mpanoratra manantombo"; Jny Franklin, "Fandalinana amin'ny fanoratana an-tanindrazana: fahalalana ny andrim-panjakana sy ny asa andrim-panjakana amin'ny alàlan'ny fitantarana ny fitetezana"; SY Yvonne Lee, "Manoratra manoloana ny manam-pahaizana: Ny andraikitry ny Ivotoeram-panoratana amin'ny fampandrosoana ny mpanoratra an-tsekoly"
2018: Mtahaka Haen, University of Wisconsin-Madison, “Fomba fanaon'ny tutors, antony manosika ary ny mombamomba azy amin'ny hetsika: ny famaliana ny traikefa ratsy, ny fihetseham-po ary ny toe-tsain'ireo mpanoratra amin'ny resaka Talk”; Talisha Haltiwanger Morrison, Oniversite Purdue, "Fiainana Mainty, Toerana Fotsy: Hahafantarana ny zavatra niainan'ireo Tutor Mainty tao amin'ny Ivon-toerana Fotsy Voalohany"; Bruce Kovanen, ”Organisation Interactive of Embodied Action in Writing Center Tutorials”; SY Beth Towle, Purdue University, "Fiaraha-miombon'antoka amin'ny fanakianana: Fahafantarana ny kolontsaina manoratra andrim-panjakana amin'ny alalàn'ny fandinihana ara-pahefana ny fifandraisana eo amin'ny fandaharam-pianarana manoratra ivon-toerana momba ny kolontsaina bitika kely."
2016: Nancy Alvarez, “Fampianarana mandritra ny latina: manome toerana ho an'ny zanety Nuestras ao amin'ny foibe fanoratana”
2015: Rebecca Hallman ho an'ny fikarohana nataony momba ny fiaraha-miasa amin'ny foibe fanoratana miaraka amin'ny fifehezana manerana ny campus.
2014: Matthew Moberly ho an'ny "fanadihadiana marobe amin'ireo talen'ny ivon-toerana fanoratana [izay] hanome ny sahan-kevitra ny fomba fandraisan'ny talen'ny serasera manerana ny firenena ny antso hanaovana tombana."
2008 *: Bet Godbee, "Mpampianatra ho mpikaroka, fikarohana ho toy ny hetsika" (natolotra tao amin'ny IWCA / NCPTW any Las Vegas, niaraka tamin'i Christine Cozzens, Tanya Cochran, ary Lessa Spitzer)
* Ny Grant Grant ho an'ny mpianatra nahazo diplaoma Ben Rafoth dia natolotry ny taona 2008 ho toy ny fanomezana fanampiana. Tsy nomena indray izy io raha tsy tamin'ny 2014, rehefa nosoloin'ny IWCA tamin'ny fomba ofisialy ny "Graduate Research Grant" miaraka amin'ny "Ben Rafoth Graduate Research Grant. Tamin'izany fotoana izany dia nitombo ho $ 750 ny sandan'ny loka ary nitarina ny fanomezana mba handoavana ny fandaniana mihoatra ny dia lavitra.